I-Añoranza, 2 bdrm | 3 ibhafu (Ukhetho) - Roatán - I-Airbnb
I-Añoranza, 2 bdrm | 3 ibhafu (Ukhetho) - Roatán
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguShelby And Sean
UShelby And Sean yi-Superhost
Igqitywe ekuqaleni kuka-2019, i-villa yolwandle yayiyilelwe ukukhulisa umbono omangalisayo weCaribbean kunye ne-2nd enkulu yesithintelo solwandle emhlabeni, iMesoamerican Barrier Reef. I-Añoranza inika iindwendwe amagumbi okulala ayi-2 aneebhedi ezi-2 zenkosi kunye negumbi lokuhlambela eline-en suite. Ukongeza, igumbi lokuhlambela le-3 eligcweleyo ukusuka kwigumbi lokuhlala elivulekileyo kunye nekhitshi. Iindwendwe ziyakonwabela ukuhlala ngaphakathi/kwangaphandle xa zithatha amanyathelo ambalwa ukusuka kwigumbi lokuhlala ukuya echibini elingenasiphelo kunye nekhitshi langaphandle. #ayayilinda
Wamkelekile e-AÑORANZA apho uyeka UKULALELA kwaye UQALE UPHILA!!
Ukusukela oko iindwendwe zethu zivula ucango oluya e-Añoranza kwaye zibone imbonakalo yolwalwa, sifuna ukwenza amava abaya kulangazelela ukubuyela kuwo. Umamkeli wethu, uRobert, uhlala kwipropathi kwaye uya kuba ngumncedisi wakho wobuqu ngexesha lokuhlala kwakho.
I-Añoranza yagqitywa ngo-2019 kwaye iyindawo enqabileyo, isiphelo esiphezulu, ikhaya leholide labucala. Igumbi ngalinye, kunye neshawari, e-Añoranza inombono we-reef kunye nemithunzi emangalisayo yamanzi aluhlaza ayingqongileyo.
I-Villa yayiyilwe ngamanqanaba ama-3 ukunika ubumfihlo bondwendwe lwethu kunye nokwandisa iimbono.
Sibonelela nge-intanethi ye-fiber optic ke ukuba ufuna ukusebenza kwaye ube kwiifowuni ze-Zoom sikugubungele.
Kukho ii-suites ezi-2 kumgangatho ophezulu ojongene ne-reef kunye nedolophu yasePunta Gorda kumgama oya eNtshona. Indawo yokuqala inika iindwendwe ibhedi yenkosi, i-air-conditioning, isilingi ifeni, i-walk-in closet, iwasha kunye nesomisi, ekhuselekileyo, igumbi lokuhlambela eline-ensuite enefeni yesilingi, iintloko ezimbini zeshawari, izinto ezingamampunge ezimbini kunye nebhafu yokufunxa ngaphakathi kwishawari apho unako. phumla kwaye ujabulele umbono. Ikwanazo neengcango zeglasi ezityibilikayo ezivuleleka kwibalcony enkulu, enefeni yesilingi. Yindawo egqibeleleyo, yabucala, yokonwabela ikofu yakho yasekuseni okanye ukutshona kwelanga phezu kolwalwa.
Igumbi lesibini, elikumgangatho ophezulu, linika iindwendwe ibhedi yenkosi, i-air-conditioning, ifeni yesilingi, ii-closets ezinkulu ezi-2 ezakhelwe ngaphakathi, ezikhuselekileyo, igumbi lokuhlambela elinophahla lwefeni, ishawari emileyo, kunye nezinto ezimbini ezingento. Ikwanazo neengcango zeglasi ezityibilikayo ezivuleleka kwibalcony yabucala.
Umgangatho ophakathi kulapho uya kuchitha ngaphezulu kwexesha lakho elininzi. Xa uvula umnyango omkhulu kwi-villa, uya kubingelelwa ngumbono we-reef kunye ne-infinity pool. Njengoko ungena kwi-Añoranza uya kuba kwigumbi lokuhlala langaphandle. Emva koko, ngasekunene kwakho ungene kumbono ovulekileyo, umoya-moya, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi kunye nenye ibhafu epheleleyo. Isantya esiphezulu seWi-Fi kulo lonke. Igumbi lokuhlala linendawo yokuhlala etofotofo kunye nescreen esingu-50" esisicaba iSmartTV esinokufikelela kwiNetflix kunye nesidlali seDVD esineeDVD. Kukwakho neBluetooth yokufumana iBluetooth onokuqhagamshela kuyo ifowuni yakho kwaye udlale umculo wakho kwizithethi ezi-2 ngaphakathi kwaye Izithethi ezi-4 ngaphandle.Ikhitshi libonelela zonke izixhobo zombane zeBosch eziquka ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, kunye nesitovu segesi.Kukho inkqubo ye reverse osmosis kwi sinki yokupheka nokusela amanzi.Indlu yonke inesihluzo samanzi seUV ukuze ukwazi ukusela amanzi Kukho itafile yokutyela ehlala 8. Ekunene kwekhitshi kukho indawo yebha enemeyikhi yomkhenkce ecocekileyo ecocekileyo kunye nefriji yewayini kunye nebhiya.
Lonke udonga lokujonga ulwandle lwegumbi lokuhlala lutyibilika iingcango zeglasi ezivuleka ngokupheleleyo ukuba zithathe iimbono zeCaribbean. Iqula elingapheliyo linyathelo nje ukusuka kudala amava angaphakathi / ngaphandle. Kukho indawo enkulu yegesi yepropane ekhitshini langaphandle ukupheka intlanzi yakho entsha ebanjiweyo okanye ilobster.
Inika iindwendwe idekhi yeyoga.
Izitepsi eziya emanzini zabelwana ngazo neendwendwe ezihlala eCasita (ukuba zibhukishwe) kwaye zihamba phantsi kweliwa kunye nemithi. Kukho iindawo zokuhlala ezi-4 ezineebhentshi endleleni ehlayo apho unokuma khona kwaye uthathe umbono okanye ukutshona kwelanga. Emva kokuba usemanzini uya kubona indlela acacileyo ngayo amanzi kwaye unokuthatha enye yeekayak zethu ezincedisayo ukuhlola ulwalwa okanye i-mangroves.
Injongo ye-Añoranza kukusebenzisa amandla kangangoko. Sicela iindwendwe zethu ukuba zincede ngokusebenzisa i-AC kuphela ebusuku okanye xa zisegumbini kwaye kungekhona xa nayiphi na iminyango ivuliwe. Siyazixabisa izibane kunye neefeni ezicinyiweyo xa kungekho mfuneko. Uya kuqaphela ukuba singomnye wezakhiwo ezimbalwa, kwi-Roatan, engahlawulisi iindwendwe ezongezelelweyo zombane osetyenzisiweyo.
Amanzi aphuma equleni kwaye ayoyika esiqithini ngoko ke ulondolozo luhlala lukhuthazwa. Amaphepha kunye neetawuli aziyi kutshintshwa yonke imihla. Enkosi kwangethuba ngokusinceda silondoloze izixhobo ezibalulekileyo zomhlaba!
I-Añoranza ikwindawo ezolileyo, ekwimpuma yeRoatan. Sisempuma kwilali, iPunta Gorda kunye ne ~ 40 imizuzu yokuqhuba ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya.
Ukuba ujonge indawo ekufutshane neWest End okanye eWest Bay, iAñoranza mhlawumbi ayisiyiyo eyona ndlela ilungileyo yokuhlala kwakho. Sincoma zonke iindwendwe zethu ukuba zichithe usuku olunye kwintshona yesiqithi kodwa, sinikezela ngamava ahluke ngokupheleleyo kunesiphelo sasentshona sesiqithi.
Umbuki zindwendwe ngu- Shelby And Sean